Waxaan ahay shaqo wanaagsan!! W/Q: Hibaaq Maxamed Ayax
Dunida waxaa jira shaqooyin kala duwan oo uu Aadamuhu ka shaqeeyo ama uu qabto.
Qof kastaaba wuxuu jecelyahay in uu helo shaqo wanaagsan, inta badana shaqadaasi in ay tahay mid wanaagsan waxa uu Aadamuhu ku qiimeeyaa qadarka Abaal marinta uu ku helaayo (Mushaharka).
Sidoo kale shaqooyinka uu Aadamuhu qabto way kala duwanyihiin, kalo adagyihiin, waxaa jira shaqooyin ay Ragga oo keliya ay qaban karaan iyo kuwo dumarka oo keliya qaban karaan oo ay karti gooni ah u leeyihiin iyo kuwo ay labada jinsiba qaban karaan.shaqo kastaa waxay leedahay xiisaheeda isla markaana naceybkeeda.
Oo shaqooyinka qaar waad ku faraxdaa markaad qabanayso, qaar kalena waad dhibsataa amaba nacdaa inaad qabato. Hadaba anigu waxaan ahay shaqo la qabto ta ugu wanaagsan, waxaan ahay shaqo xiiso badan leh isla markaana aad qabashadeeda ku farxayso, degenaansho maskaxeed iyo mid Ruuxiyeed baa ad ka helayso.
Waxaan ahay shaqo aad qabashadeeda ku helayso Abaal marin lahelo ta ugu wanaagsan, Abaal marintaasna uu Allah sw ku siinayo. Waxaan ahay shaqo wanaagay leedahay aawadeed Allah Ku xusay Kitaabkiisa Kariimka ah:
تأويل قوله تعالى : “وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِين”
Waxaan ahay shaqadii Anbiyada iyo Rususha. Taas oo ah gudbinta ama fidinta DACWADA ISLAAMKA.
W/Q: Hibaaq Maxamed Ayax